Madheshvani : The voice of Madhesh - ‘हिरोइन’ पाएपछि किन गर्नु फुपूको रोल ?
फिल्मको खडेरी लाग्दा कलाकारले कस्ता कस्ता भूमिका स्विकार गर्छन्, यो सबैलाई थाहा छ । तर, एक–दुइवटा राम्रा ब्यानरका फिल्म आएपछि कलाकारको मिटरको पारो उकालो लाग्छ । अभिनेत्री बर्षा सिवाकोटीको हकमा पनि यस्तै लागू भयो ।
उनले, आफूले फिल्म क्षेत्रमा डेब्यू भूमिकामा काम गरेको फिल्म ‘नाई नभन्नु ल २’को पाँचौ श्रृङ्खलामा अभिनय गर्न मानिनन् । फिल्ममा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काकी फुपू बन्नुपरेपछि आफूले काम नगरेको भन्दै उनले मिडियामा फुकिन् ।
निर्देशक विकासराज आचार्यले नै उनलाई फिल्म क्षेत्रमा ल्याएका थिए, तर उनकै फिल्ममा उनलाई काम गर्न मन लागेन । लागोस् पनि कसरी, बर्षाको हातमा अहिले फिल्मको अभाव छैन । ‘भैरे’ पछि ‘जय शम्भु’ । यसपछि, ‘विर विक्रम २’ ।
यसमा पनि विचमा अमेरिका पुगेर आउनुछ ।लगालग हिरोइन बनिरहेको बेलामा कसैलाई फुपू बन्न मन लाग्ला र ? हातमा फिल्म नै नभएको बेला फुपू, अन्टी, दिदी बनेका उदाहरण धेरै अभिनेत्रीमा नदेखिएको हो र ?